बैंकबाट घर कर्जा निकाल्न के के गर्ने ? (सम्पूर्ण विवरणसहित) ~ Banking Khabar
बैंकबाट घर कर्जा निकाल्न के के गर्ने ? (सम्पूर्ण विवरणसहित)
Bankingkhabar /August 24, 2021
बैंकिङ खबर । घर खरिद गर्नु सबैका लागि एउटा ठुलो सपना हो । यदि तपाई घर खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, साथ साथै होम लोन समेत लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाइले केहि कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । तपाइले ऋण लिनु पूर्व केही कुाहरुमा ध्यान दिनुभयो भने राम्रोसँग होमलोन डिल गर्न सक्नुहुनेछ ।